China Solar Refrigerator, Solar Power Refrigerator, Mini Solar Refrigerator Supplier
Tsanangudzo:Solar Refrigerator,Solar Power Refrigerator,Mini Solar Refrigerator,Simba Saving Solar Refrigerator,,
Solar Refrigerator,Solar Power Refrigerator,Mini Solar Refrigerator,Simba Saving Solar Refrigerator,,
Zvigadzirwa zve Solar Refrigerator , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Solar Refrigerator , Solar Power Refrigerator vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Mini Solar Refrigerator R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Solar Refrigerator Vatengi
Tsika dzefriji dzinoshandisa simba rakawanda remagariro. Kubva pane mamiriro ezvinhu epasi rose ekugonesa kwepasi rose nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kudai kwekuchenesa mafiriji kuchave kusingadzivisiki. Mukuwedzera, kushaya magetsi uye simba muAfrica uye kune dzimwe nzvimbo dzisiri kure hazvina kushandiswa mumagetsi ekushandisa, uye hazvigone kushandiswa kwefrijiji kuchengetedza zvokudya, zvichipa misika yekugadzira kwemafiriji ezuva. Solar refrigerator inowanzobatanidza solar photovoltaic refrigerator uye solar semiconductor refrigerator. Solar frijiyo inobva pane zvakagadzirwa nefriji yekare, iyo inoumbwa nezuva, masheji, accumulator uye firiji. Firiji inoshandisa kwete simba rezuva chete asiwo yezvigadzirwa zvemhuri. Ndiyo midziyo yakanakisisa yemhuri munyika dzichiri kusimukira.